Weli Naxariistii Dadka kama Guurin | Doodwadaag waa Danwadaag.
Weli Naxariistii Dadka kama Guurin
Geeddi wuxu ka mid ahaa muruqmaalka magaalada Xamar guryaha ka dhisa, wuxu ka tirsan yahay kuuli guryaha dhismahooda qaabilsan, , wuxu deggan yahay agagaarka suuqa Buula-xuubey degmada Wadajir, laakiin meelkasta oo shaqadu ka socoto magaalada waa tagaa, waa nin ehlu diin ah oo aan shanta salaadood midna ka tegin, wuxu rumeysan yahay in adduunkaan ay ka jirto caddaalad darro, boob iyo dhac iyo wax kasta maskaxdu dadku ka dhiidhiyeso, saas darteed ay khasab tahay in uu jiro adduunyo kale oo dhammeystiran oo Ilaahay la hor tagayo, kadibna dulmigii adduunka ka dhacay caddaalada Ilaah la hor keenayo.
Markuu shaqada aadayo wuxu dhabarka ku qaataa jawaan weyn oo ay ugu jiraan qalabka uu u adeegsado dhismaha, marka uu soo qaato lacagta uu shaqaystana wuxu salka u dhigaa jawaankaas, qalabka kalena ka kor mariyaa, markey mooriyaantu joojisana cidna wax kuma tuhunto, waa iska sii daayaan.
Sidii caadadiisa ahayd asaga oo u jarmaadaya shaqadiisa ayuu dhulka wuxu ka helay bac duuduuban , waa soo qaaday markuu furfuray wuxu ku arkay lacag farbadan oo doollar ah, wuxu ku fekeray lacagtaan in ay ka dhacday qof asagoo kale ah, khasabna uu welwelsan yahay, haddii uu qaatana cid ku haysataa ma jirto, laakiin wuxu xusuustay in ay imaan doonto maalin dadku wada qaawan yahay oo aan cidina waxba haysan, oo qof waliba camalkiisii adduunyada mooye aanu wax kale haysan, wuxu diidan yahay maalintaas in camalkiisa wanaagsanaa laga siiyo qofkaas ay lacagtu ka luntay, sidaas darteed ayuu wuxu u geeyey imaamka masaajidka, una sheegay sida uu ku helay. Iimaamkii masaajidka wuxu dadkii tukanayey u sheegay in uu hayo lacag baadi ah, ciddii sheegata tiradeeda iyo waxa ay kooban tahayna la siinayo.
Duq Batuulo oo qof da’ ah waxay la deganeyd wiilkeeda iyo xaaskiisa iyo shan caruur ah oo ay dhaleen, kan u weyni jiro 12 gu’, kan ugu yarina jiro 2 sano, wiilkii shaqo la’aan ba’an baa ku dhacday, oo reerkii baahidoodii waa dabooli waayey, kadib nin saaxiibkiis ah, oo ka mida ragga u soo xula dhalin yarada kooxda Alshabaab, asagoo ka faa,iideysanaya xaaladda qofkaasi ku sugan yahay, maskaxdoodana ka buuxiya nacayb badan oo uu qaado bulshada inteeda kale, ayaa u soo jeediyey inuu ka mid noqdo kooxaha nabaddiika, halkaasna lacag badan la siinayo marka uu iyaga u shaqeeyo ajar aad u tiro badanna Ilaahay agtiisa ka helayo.
Kooxdaas ayuu ku biiray, kadibna muuqiisii waa la waayey, waxay u tababareen sida miinada loo aaso, kadibna loo qarxiyo. Xaaskii dani waxay ku khasabtay in ay caruurta u raadiso wax ay ku quudiso, waxay bilowday in ay shaah, canjeelo iyo rooti geyso meelaha dhismayaashu ka socdaan, si kuuligu uga iibsadaan, caruurtana ayeeyadood baa hayn jirtay.
Iyadoo subax soo jarmaadey una socota shaqadeeda ayaa baabuur ag marayey miino la kacday, hooyadii caruurta dhashayna halkaas ayey ku qur baxday, miinadaas qarxinteeda waxa dadkii soo maleegay ka mid ahaa ninkeedii.
Duq Batuulo iyo shantii caruurta yaryareyd baa isu soo haray, habeenkii markii ay salaaddii cishe tukatay ayey Ilaaheed bariday in uu ferej u furo. Subaxdii markii ay soo kacday, caruurtii kii ugu yaraa inta soo xambaartay ayey soo wada kaxaysay, wax ay soctaba waxay timi meeshii hooyadood miinadu ku dishay, geed ku yiil hoostood bey fariisteen.
Toddobaad kadib markii Geeddi lacagta helay, oo asaguna shaqadiisa u kallahaya ayuu soo maray halkii habartu carurta la fadhiday, waa arkay habarta iyo caruurta meesha fadhiya, laakiin socdkiisii ayuu iska sii watay. Waxay ahayd xilli xagaa ah oo shuuxa roobka xagaayadu da’aayey.
Markuu Geeddi shaqadiisa soo dhammeystay wuxu soo maray jidkii uu markii hore soo maray, wuxu arkay habartii iyo caruurtii oo weli geedka hoostiisa fadhiya oo ay ka muuqato diif iyo dacdarro badan, calaldii ay qabeena ku qoyeen. Waa ku leexday, salaan kadib wuxu weydiiyey xaaladooda iyo sababta ay meesha u fadhiyaan ilaa saaka.
Duq Batuulo waxay tiri: Caruurtaan aabahood oo wiilkayga ah waa la la’yahay dhawr bilood, hooyadoodna laba beri ka hor ayaa miino dishay waddadaan agteena ah, xalay markaan seexday ayaa hurdadii la iigu sheegay in aan caruurta kaxeeyo oo aan imaado geedkaan, kadibna qof noo miciina Ilaahay noo soo dirayo, saaka saan u imi weli waa sugayaa, meel kale oo aan u ciirsadana ma hayo.
– Waxan u maleynayaa inaan aqiin hooyadood, Ilaahay ha u naxariisto. Ma Muxubadii shaaha noo karin jirtay ayey ahayd, oo halkaan qaraxii ka dhacay dadkii ku dhintay ka mid ahayd.
– Haa Eeddo iyaday ahayd.
– Maxaa u tagi weydeen xeryaha barakacayaasha? Geeddi baa weydiiyey
-Edddo sow ma maqal in ay dadka xabbis silig leh geliyaan, kadibna aduunyada ugu barya tagaan, wixii ay magaca dadka ku helaanna suuqa geeyaan, kadibna laftii oo aan hilib lahayn ku soo tuuraan, Ilaahay wuxu noo qoray baan heleynaa, xabbiskooda ma galayo. Duq batuulaa ku catowday.
Geeddi xoogaa markuu fekeray wuxu yiri: Eeddo i sug waa kuu soo noqonaya, haddii Alla idmo. Waa yahay, khayr Allaha ku siiyo igaarkay. Duq Batuula ugu duceysay.
Geeddi Imaamkii masjidka ayuu u tegay xaaladii habartii iyo shanta caruur ayuu uga sheekeeyey iyo in ay ku habboon tahay in lacagtii la helay oo ilaa hadda aan cidina soo sheegan la siiyo, Iimaamkii waa ku raacay, labadooda oo wada socda ayaa u yimi habartii, markuu arkay xaaladeeda Imaamkii wuxu soo jeediyey in qoyskaan loo maamulo lacagta, in loo qabto adeegto u shaqeysa, oo xattaa marka lacagtaani dhammaato ay wax ku yeeshaan sadaqada masaajidka la siiyo ilaa ay caruurtu ka hana- qaaddo, oo ay noqdaan qoys uu masjidku kafaala qaado, Geedi aad buu ugu farxay soo jeedinta Imaamka waana ku raacay.
W/Q Maxamad Cabdullaahi Jaamac